Thwebula UltraISO 9.6.6.3300 – Vessoft
UltraISO – a isofthiwe esinamandla ukusebenza images. Isofthiwe isekela eziningi ezithandwayo amafomethi image, ezifana: ISO, img, CIF, KUKABIN, NRG njll Izimfanelo esemqoka UltraISO zihlanganisa ekudaleni, ukuhlela, nokuguqula noma ukususa of idatha yesithombe. Isofthiwe iqukethe module of ISO-image Isakhiwo optimism ukusindisa of sediski. UltraISO kwenza ukudala ebhuthini amadiski nigibele amafayela image kuya izindilinga eziyizicaba virtual.
Support for amafomethi athandwayo
Yakha, uhlele, ukuguqula idatha image
Dala bootable idatha ezithwala
Optimism lwemtimba ISO-image
Amazwana on UltraISO:
UltraISO Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... Recuva 1.53.1087 Standard futhi Portable
English, Українська, Français, Español... AOMEI Partition Assistant 6.1 Standard, Professional futhi Lite
English, Français, Español, Deutsch... Nero 2017 Classic futhi Nero Burning ROM
English, Français, Español, Deutsch... MiniTool Partition Wizard 9.1 Home Edition futhi Professional Edition
Akwazi ukugcina Ithuluzi defrag the hard drive nokwandisa uhlelo. Isofthiwe ikuvumela ukuba basebenze nge khadi, ngemoto idrayivu kanye namadivayisi ehlukahlukene USB.
Akwazi ukugcina An-okulula ukusetshenziswa software ukuze alulame idatha ezinhlobo ezahlukene kukhompyutha yakho bese abathwali ehlukahlukene idatha. Isofthiwe isekela hard drive, kanye izinhlelo ifayela wezinhlobo ezihlukahlukene.
Akwazi ukugcina Isofthiwe ukufaka uhlelo lokusebenza lwe-Linux kwi drive flash noma hard drive. Isofthiwe isekela iningi kukaMoya Linux, izinguqulo ezehlukene izinhlelo.
Isithombe Isofthiwe kwakha slideshows professional kanye eliphezulu. Futhi isekela eziningi abezindaba izakhiwo kanye nemiphumela ehlukahlukene sokuqhafaza noma umsindo.
Amamephu Ithuluzi ukulawula amadivaysi GPS-navigation lakhiwa TomTom. Isofthiwe ikuvumela ukulawula uhlelo lokuhamba futhi athole i ukufinyelela okuqukethwe idivayisi.
English, Afrikaans, Français, Español... HDD Regenerator 15.0.0.573
Testing Ithuluzi for the kanzima oshayelayo alulame. Isofthiwe usebenza nge izinhlelo ifayela ezahlukene futhi likuvumela ukuba ihlole hard drive komonakalo noma amaphutha.